Banyere Anyị - Wenzhou Ncr Industrial Co., Ltd
Magnetik Latching Relay
High Power ezigara
Solid State ezigara
Sockets maka ezigara
Ọdụdọ KWH Meter Components
NCR e guzobere na 2003, dị ka otu onye nke na-eduga ọsọ agba anọ na-emepụta na China na ihe karịrị 600 na-arụ ọrụ. Anyị na-emesapụ aka ka etinye ihe ndị kasị elu mmepụta ngwá na technology n'ụwa nile. Kwa afọ mmepụta bụ ihe karịrị 100 nde iberibe.
Ngwaahịa nso agụnye akpa Relay, Latching Relay, Relay Socket, Solid State Relay, Power Semiconductor modul na Bridge Rectifier wdg
N'okpuru ISO9001: 2000, ISO14001: 2004 & OHSASA18001 Quality System, anyị nwetara CCC, CQC, OA, Mankeumman & TUV ihu ọma na-RoHS Dabara akwụkwọ. Dabere na a pụrụ ịdabere na àgwà, nakwa dị ka ndị magburu onwe ahịa ọrụ, anyị na-na-ere ọma nile Chile China na n'ụwa nile.
Iji nweta ububo mmepe na zuru ụwa ọnụ ahịa, anyị ga-esi ọnwụ na management uche "Iguzosi ike n'ezi & Transcendence", na-enye pụrụ ịdabere na ngwaahịa, elu mgbe-ire ọrụ na na-na oge nnyefe izute mkpa nke niile n'ụwa nile ahịa.